ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: October 2012
တရုတ်နိုင်ငံမှရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးလေ့ ကျင့် ပေးထားသူများထဲမှာအ
သူတို့ ကိုအသေးစိတ်ကအစေ အသေအချာလေ့ ကျင့် ပေးထားလိုက်ပုံက အပြီးပြည့် စုံဆုံး၊အ
ကောင်းဆုံး ပြုံးတတ်အောင်ပင် မကျန်စေရပါဘူး...
ချမှတ်ပေးထားတဲ့ စည်းကမ်းလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းသာ လေ့ ကျင့် လိုက်နာမယ်ဆိုပါက ဒီလိုပြုံး
တတ်ဖို့ ဆိုတာလည်း အလွယ်လေးဆိုတာ ဖေါ်ပြပါဓါတ်ပုံများကညွှန်ပြနေပါတယ်...
တရုတ်နည်းတရုတ်ဟန်နဲ့ အလှဆုံးပြုံးနိုင်အောင်လေ့ ကျင့် ကြမယ်...
Smile Chinese style: During the 'how to smile' course in Dalian, Liaoning Province, China, customs police were made to practice by holdingachopstick between their teeth and smiling
တရုတ်နိုင်ငံ၊ လျောင်နင်းပြည်နယ်၊ ဒါလျမ်း တွင်လေ့ ကျင့် သင်ကြားသည့် " အယဉ်ကျေးဆုံး၊သူ့ 
အပြုံး " သင်တန်းတွင် အကောက်ခွန်ရဲမေများအား ပါးစပ်အတွင်းသွားကြားတွင် (တရုတ်များအ
စားအစာစားရာတွင်သုံးသည့် ) တူချောင်းလေးများ ကိုက်ကာလေ့ ကျင့် ကြရပါတယ်...
စက်ရုပ်နှလုံးသားနဲ့ အပြုံးများတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်...
ယခုကဲ့ သို့ လေ့ ကျင့် ပေးရခြင်းမှာလည်း တာဝန်ရှိသူဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ကျင့် ဝတ်စည်းကမ်း
နှင့် အညီတစ်ပြေးညီဖြစ်စေရန်၊ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြင့် စေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်လို့ လျောင်နင်း
အကောက်ခွန်ရဲတပ်ဖွဲ့ ရုံးရဲ့ အဆိုအရသိရပါတယ်...
During the 'how to smile' course in Dalian, Liaoning Province, China, customs police were made to practice by holdingachopstick between their teeth and smiling.
Posted by peter kyaw | at 12:44 PM |0comments
တရုတ်နိုင်ငံမှ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ စခန်း၊ ရုံးအဆောက်အဦးတစ်ခုမီးစွဲလောင်ခဲ့ သဖြင့် မီးသတ်တပ်
ဖွဲ့ ဝင်များအရှက်တကွဲဖြစ်ခဲ့ ရကာ တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လှောင်ပြောင်ရယ်ပွဲဖွဲ့ စရာဖြစ်ခဲ့ ရပါတယ်...
အရှက်ရခဲ့ ကြသည့် သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူများပထမတွင် ထိုမီးလောင်မှုအား
မီးသတ်လေ့ ကျင့် ခန်းတစ်ခုအဖြစ် ပြောဆိုဟန်ဆောင်ခဲ့ ကြပါသေးတယ်... သို့ သော်လည်း မီး
တောက်မီးလျှံများက စခန်းအဆောက်အဦးအား ၀ါးမြိုသွားသောအခါတွင်မှ ဂဟေဆော်သူများ
မှ ဓါတ်ဆီသိုလှောင်ရုံအနီးတွင် ဂဟေဆော်ခဲ့ ခြင်းကြောင့် မီးထလောင်ခဲ့ ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၀န်
မီးမပေါ့ ဆစေရန်၊ သူထုတ်ပြန်...
လောင်ပြန်တော့ လည်း သူလဲပဲ... ကဲ...ဘယ်လိုလုပ်မလဲ...
" ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာနဲ့ ပဲ မီးဟာ အလျင်အမြန်ကူးစက်သွားပြီး ငြိမ်းသတ်လို့ မရနိုင်
အောင်ဖြစ်ခဲ့ ရပါတယ်..." လို့ တရုတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း၊ ဂန်စုပြည်နယ်၊ လန်ကျိူးအရပ်မှ မီးသတ်
တပ်ဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူက ၀န်ခံပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ နှင့် ဝန်ထမ်းများသာ အပြစ်တင်ရမှာဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်သုံးသပ်သူများကဆိုပါ
သူတို့ ပဲ တစ်ခြားသူတွေကိုတော့ ဒါလုပ်ပါ၊ဟိုဟာလုပ်ပါ၊ မီးသတ်ဗူးဆိုယင် ဘယ်နှစ်ဗူးဆောင်
ပါ ဆိုတာတွေပြောပြီးသူတို့ ချမှတ်တဲ့ စည်းမျဉ်းတွေမလိုက်နာလို့ ဆိုပြီး ပိတ်ပစ်ခံရတဲ့ စီးပွားရေး
လုပ်ငန်းတွေလည်းမနည်းပါဘူး၊ အခုတော့ သူတို့ စခန်းကိုပါပိတ်ပစ်ဖို့ မသင့် ပါလား လို့ ဒေသခံ
Red-faced firemen becameanational laughing stock when their own fire station was gutted byablaze
Embarrassed officials at first tried to pass off the fire asa"training exercise." But at the flames began to engulf the station's interior they admitted that welders had set fire toacanister of petrol being stored nearby.
"Unfortunately it spread very quickly and was soon out of control," confessedaspokesman in Lanzhou, Gansu province in northern China .
Critics say the firefighters have only themselves to blame. "They're forever telling other people what to do, how many extinguishers to have and closing down businesses because they don't meet fire regulations. How about we close them down now?" said one local man.
Posted by peter kyaw | at 2:38 AM |0comments
Labels: news: austriantimes.com
အခုတော့ ကော်ဖီသောက်လိုက်ဦး... ပြီးတော့ မှဆက်ပစ်ကြတာပေါ့ ...
တစ်ကယ့် မျိူးချစ်စိတ်ရှိသူတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်ဆိုတာ တိုင်းပြည်ကြီးကို အစိုးရ
(နိုင်ငံတော်) ဆိုသူများရဲ့ ရန်က ကာကွယ်ဖို့ ပါပဲ...
၃၁ ဘုံသားတွေပဲ... ( တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အချင်းချင်းရန်မပြုကြယင်ပေါ့ ...)
ဘယ်သောအခါမှ သူမကားရပ်စောင့် မယ့် မှတ်တိုင်မဖြစ်ရပါစေသား...
သြော်....မတော်ခြေချော်သွားမှဖြင့် ....ရင်လေးမိပါဘိတယ် ...
ခေတ်သစ် အင်္ဂလုဂိမာလရဲ့ နှမလေလား...
သူကတော့ ဘာတွေများလိုက်ဖြတ်မလည်းမသိဘူး...အခုအထိတော့ ဖြတ်ထားတာ
ရာဇပလ္လင် (အာဏာ၊ ပါဝါ၊ ရာထူး) ဆိုတာ တရားသဘောနဲ့ ကြည့် ယင်ဒီလိုမြင်မိမှာပါ...
အထိုင်မတတ်၊ အနေမတတ်ယင် ဒီထက်တောင်ဆိုးနိုင်ပါသေးတယ်...ဒီခုံက လောလောဆယ်
တစ်ဘ၀ပဲခံရမှာလေ... နောက်ထပ်လာဦးမယ့် ဘ၀တွေရှိသေးတယ်...
သေယင်ပြီးရောဆိုတဲ့ မိစ္ဆာဒိဌိတွေတော့ ဒါတွေဘယ်ယုံမလည်း...
ယောနိသောမနသိကာရ နဲ့ ယှဉ်ယင်တော့ ပိုပြီးငြိမ်းချမ်းပေမပေါ့ ...
နေရာအရပ်ဒေသကလည်း ဥပနိဿယ ပစ္စည်း ( အားကြီးသောအကြောင်းအထောက်အပံ့ )
ကဲ... စုတ်ပြဲလို့ တော့ ဖြင့် စိတ်မညစ်နဲ့စတိုင်ထုတ်ယင် စတားဖြစ်တယ်...
ဒီဓါတ်ပုံကတော့ ဖြင့် တရုတ်ပြည်တစ်လွှား ပြစ်တင်ရှုံ့ ချမှုအကြီးအကျယ်ခံနေရသည့် အပြင်
တစ်ကမ္ဘာလုံးကပါ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်စေခဲ့ သည့် အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိ ဆရာမလေး ယန် ယန်
ဟုန်အမည်ရှိမူလတန်းကျောင်းဆရာမတစ်ဦးမှ အော်ဟစ်ငိုယိုနေသည့် ကျောင်းသားကလေးငယ်
တစ်ဦးအား နားရွက်မှနေ၍ဆွဲကာ ကိုင်မြှောက်နေပုံပဲဖြစ်ပါတယ်...
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကျေကျန်းပြည်နယ်၊ ၀န်လင်းဒေသမှ မစ္စယန်ဟုန်ရဲ့ စာသင်ခန်းအတွင်း ကလေး
ငယ်များအား ရေပုံဖြင့် ဦးအောင်းအားစွပ်ထားပုံ၊ ပါးစပ်များအား တိတ်၊ ပလာစတာဖြင့် ပိတ်ကပ်
ထားပုံ၊ အမှိုက်ပုံးများထဲတွင် ဦးခေါင်းများစိုက်ထားစေပုံ အစရှိသည့် နှလုံးသားကင်းမဲ့ စွာ၊ စာနာ
မှုကင်းစွာ နှိပ်စက်ပြုမူအပြစ်ပေးနေသည့် ပုံပေါင်း ၇၀၂ ပုံအထိပေါ်ပေါက်လာခဲ့ ပါတယ်...
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်ကတော့ ပင်လယ်ကိုကြည့် မလားဆိုပြီး လူကြီးတွေက နားထင်ကနေ
ကိုင်မြှောက်ကာ ကလူကျည်စယ်ခဲ့ ဖူးပါတယ်...ဒါပေမယ့် လူတစ်ကိုယ်လုံးရဲ့ အလေးချိန်
ကို ဒီလိုနားရွက်ကနေ ကိုင်မြှောက်တာကတော့ ရကက်စက်လွန်းရာကျပါတယ်...
ဒါကြောင့် လည်းကလေးငယ်ခမျာ နာလွန်းလို့ ငိုနေရှာတာပါ...
ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ အပြစ်ပေးမှု၊ ရာဇ၀တ်သားများဆိုယင်တောင်လွန်လှပြီလို့ ဆို
ရမှာပါ.... ဒီဆရာမတော့ အယင်ခေတ်ကထောက်လှမ်းရေးမှာလုပ်လို့ ရပြီ....
နောက်ထပ်ပုံများတွင်တော့ စာသင်ခန်းတစ်ခုလုံး ဘီယာပုလင်းလွတ်များဖြင့် ပျံ့ ကြဲနေသည်
ကိုလည်းတွေ့ ခဲ့ ကြရပါတယ်....
ယခုကဲ့ သို့ အံ့ သြထိတ်လန့် တုန်လှုပ်ဖွယ် အပြုအမူပုံများကို အဆိုပါဆရာမမှ သူမ၏မိတ်ဆွေ
သူငယ်ချင်းတစ်ဦးထံသို့ ပေးပို့ ခဲ့ ပြီးနောက်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်တင်ခဲ့ ပြီးအုံးကျွက်ကျွက်ဝေဖန်ပြစ်
တင်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ဆရာမယန်ဟုန်ကတော့ ကလေးငယ်အားနားရွက်မှကိုင်ဆွဲပြီးမြှောက်ခဲ့ တာနှင့် ပါတ်သက်ပြီး
သူမအနေနှင့် ကလေးအားချစ်လွန်းခင်လွန်းလို့ စမိ၊ နောက်မိတာပါလို့ ဆင်ခြေပေးခုခံပြောဆို
"ကျွန်မက ဓါတ်ပုံလေးရိုက်ထားချင်မိတာပါ... ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးပြီးချင်းပဲ သူ့ ကိုအောက်ပြန်ချပေးခဲ့ 
လိုက်ပါတယ်..." လို့ သူမကဆိုပါတယ်...
သူမအား အလုပ်မှထုတ်ပယ်လိုက်ပြီး ထိုကျောင်းအားလည်းအပြစ်ပေးအရေးယူခဲ့ ပါတယ်လို့ ဒေ
ယခုကဲ့ သို့ အရှက်ရဖွယ်ရာဓါတ်ပုံများဟာ မကြာသေးခင်ကလည်း တရုတ်နိုင်ငံမှကျောင်းဆ၇ာ
မတစ်ဦး တပည့် လေးများအား အချက်ပေါင်းများစွာ ပါးရိုက်ပြီးဆုံးမနေသည့် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း
တစ်ခုပေါ်ထွက်ခဲ့ ပြီးနောက် ဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်...
အပြစ်ပေးအရေးယူမှုအဆင့် ကတော့ ရက်စက်လွန်းလှပါတယ်...
ဒီလိုမျိူးတော့ ဘယ်မိဘကမှ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိတာမို့ ဝိုင်းဝန်းပြစ်တင်ရှုံ့ ချခဲ့ ကြတာပါ...
စစ်ကြောရေးပြန်ခဲ့ တယ်နဲ့ တူတယ်...ဆရာမက....ဆိုးသွမ်းမှုအပေါင်းသရဖူဆောင်းတယ်ပေါ့ ...
စာမဖြေနိုင်သည့်ကလေးငယ် ၄ ဦးအား အချက်ပေါင်း ၁၂၀ ကျော်အောင်ပါးရိုက်ကာအပြစ်ပေး
ခဲ့ သည်ကို မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုကင်မရာမှ ရိုက်ကူးထားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
အဆိုပါ မိနစ် ၃၀ ကြာ ကလေးငယ်များအား ရိုက်နှက်၊ ကန်ကြောက်နေသည့် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း
အား တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ ရှန်စီပြည်နယ်၊ တိုင်ယွမ်ဒေသမှ မူကြိုကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင်
တပ်ဆင်ထားသည့် လုံခြုံရေးကင်မရာမှရိုက်ကူးထားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ထိုအဖြစ်အပျက်ဟာလည်း ကျောင်းသူလေးတစ်ဦးရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ မစ္စတာဟန်အမည်ရှိအမျိူး
သားတစ်ဦး ၎င်း၏သမီးလေးကျောင်းမှပြန်လာရာတွင် မျက်နာတစ်ခုလုံးနီရဲယောင်ကိုင်းနေခဲ့ 
သည်ကို တွေ့ ရှိသတိပြုမိခဲ့ ရာမှ စတင်ဖေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
မစ္စတာဟန်တစ်ယောက် သမီးလေးဖြစ်သူတက်ရောက်သည့် ကျောင်းသို့ သွားရောက်ကာ လုံခြုံ
ရေးကင်မရာမှတ်တမ်းအား ကြည့် ရှုခွင့် တောင်းဆိုခဲ့ ရာမှ ယခုကဲ့ သို့ ၎င်း၏သမီးဖြစ်သူအပြင်
တစ်ခြားကလေးငယ်သုံးယောက်အား မတော်မတရားနှိပ်စက်ထားခဲ့ သည်ကို စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်နိုင်
" နာရီဝက်လေးအတွင်းမှာပဲဗျာ... အဲဒီဆရာမက ကျွန်တော့ သမီးလေးကို ၄၃ကြိမ် ပါးရိုက်ခဲ့ ပြီး
၂ ကြိမ် ကန်ကျောက်ခဲ့ ပါတယ်..." မစ္စတာဟန်ကဆိုပါတယ်....
ဒါကတော့ ကလေးနားရွက်ဆွဲပြီးမြှောက်ခဲ့ တဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိ ဆရာမလေးရဲ့ 
ခွင့် လွှတ်ပါမည့် အကြောင်းလည်း ရှိခိုးဦးတင်၊၀န်ချတောင်းပန်ရပါသေးတယ်...
ကိုကိုရေ... ကလေးတွေကမနိုင်ဘူး... အရမ်းဆော့ တယ်ကွယ်...မနိုင်ဘူး...နှစ်ခါခွဲသယ်ရမယ်...
ဒီမှာတော့ ဘီယာပေါ့ .... လို့ များမက်ဆေ့ ခ်ျပို့ နေလား...
(ကလေးများကိုပါးရိုက်ဆုံးမသည့် ဆရာမဟာ) ထိုဗီဒီယိုကလစ်ပါ အချိန်တိုအတွင်းမှာပင်တစ်
ခြားကလေးများကိုလည်း တစ်ယောက်ကို၄၃ ကြိမ်၊ တစ်ခြားတစ်ယောက်ကို ၂၇ကြိမ်၊ နောက်
ထပ်တစ်ယောက်ကို ၁၀ ကြိမ်တိုင်တိုင် ပါးရိုက်ခဲ့ ပါတယ်လို့ မစ္စတာဟန်ကဆိုပါတယ်...
ဒီမိန်းမဟာ မကောင်းဆိုးဝါးမမို့ ဆရာမလုံးလုံးမဖြစ်ထိုက်ပါဘူးလို့ လည်းသူကဆိုခဲ့ ပါတယ်....
ပြီးတော့ သူ့ ရဲ့ သမီးလေးကျောင်းကပြန်လာယင် အခုလိုအနာတရဖြစ်ခဲ့ တာ ပထမဦးဆုံးအ
ကြိမ်မဟုတ်ပဲ ၎င်းအနေနှင့် ကလေးချင်းဆော့ ကစားယင်းထိမိခိုက်မိတာလို့ ပဲ ယူဆခဲ့ ကြောင်း
ဖြင့် လည်းသူကပြောခဲ့ ပါတယ်...
"ဆရာမကဗျာ ကလေးကို ဆယ်ဂဏန်းထက်ကျော်တာတွေ ပေါင်းခိုင်းတယ်...ကလေးက မတွက်
တတ်ဘူး၊ မလုပ်တတ်ဘူးပြောတာနဲ့ ပါးရိုက်တော့ တာပါပဲ " လို့ ပဲသူကဆိုပါတယ်...
အဆိုပါဆရာမအား မူကြိုကျောင်းမှ ထုတ်ပယ်ခဲ့ လိုက်ပါတယ်...
Posted by peter kyaw | at 2:47 AM |0comments
လှချင်သလား... ပါးရေတွန့် နေတာတွေပျောက်ချင်သလား..
ထိုင်းအလှပြင်ဆိုင်မှာ ပါးရိုက်ခံလိုက်ပါ... ဒေါ်လာ ၃၅၀ပါ...
ထိုင်းရိုးရာသဘာနည်းဖြင့် အလှပြုပြင်ရေး၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးက သူမအ
နေဖြင့် နုပျိူလန်းဆန်း၊ ရှင်သန်လှပလိုသူများအတွက် ပါးရိုက်ပေးခြင်းဖြင့် စွမ်းဆောင်ကုသပေး
ထိုင့်းရိုးရာပါးရိုက်ဝန်ဆောင်ကုသနည်းဖြင့် အရေးပြားတွန့် ခြင်း၊ရှုံ့ တွခြင်း၊ လျော့ ရဲခြင်းများအား
ခွဲစိတ်ပြုပြင်ဆရာမလိုပဲ သက်ဆိုင်ရာကိုယ်ခန္ဒာအစိတ်အပိုင်းများအား ခပ်ဆတ်ဆတ်ရိုက်ခြင်း၊
နှိပ်နယ်ခြင်း၊ထုပေးခြင်းဖြင့် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် လေ့ ကျင့် သင်ကြားတတ်မြောက်လာခဲ့ သည့် တာတာဆွမ်ဘန်သမ် က သူမ၏
ပါးရိုက်ကုသခြင်းနုပျိူလန်းဆန်း အလှပြင်ခန်းဟာ အနောက်ကမ္ဘာမှာတော့ ပထမဦးဆုံးလို့ ဆို
နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဆန်ဖရန်စစ်စကိုမြို့ ရှိ ဆိုင်ခန်းတွင် ၁၅မိနစ်ကြာ အလှပြုပြင်ဖန်တီးပေးမှုအတွက်
ဒေါ်လာ ၃၅၀ မျှသာ ၀န်ဆောင်ခယူပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
Ouch! Tata Sombuntham, from Thailand, says she is the first face-slapping beauty therapist in the western hemisphere, and charges $350 for each 15 minute session at her San Francisco salon
ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အိုမင်းရင့် ရော်ခြင်း၊ အေ၇ပြားလျော့ တွဲခြင်းကို တားဆီးပြုပြင်နိုင်ကြောင်း
ဆေးပညာဆိုင်ရာ အထောက်အထား မရှိသေးသော်လည်း ထိုသို့ ရိုက်ခတ်ပေးခြင်းဖြင့် သွေး
လှည့် ပါတ်မှုအားကောင်းစေပြီး ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုစေနိုင်ပါတယ်လို့ ဆရာဝန်များ
က သဘောတူ ၀န်ခံပြောဆိုခဲ့ ကြောင်း အေဘီစီ သတင်းကဆိုပါတယ်...
သို့ သော်လည်း သိသာထင်ရှားမှု၊ အကျိူးဆက်ကတော့ ချက်ခြင်းမြင်နိုင်ပါတယ်လို့ ထိုအလှပြု
ပြင်ခြင်း ပါးရိုက်အနှိပ်ခန်းကို တာတာနှင့် အတူပိုင်ဆိုင်သည့် သူမ၏ခင်ပွန်း မာဝမ် တို့ ကဆိုပါ
"ဘာလက်ဝတ်ရတနာမှဝတ်မထားမိပါစေနဲ့ ... လက်တွေ၊ ခြေတွေအကြောလျော့ ထားပါ... ခိုင်း
တဲ့ အတိုင်းလိုက်နာပြီး ကြောက်ရွံ့ စိုးရိမ်မှုမထားပါနဲ့ ...
ဒါဟာ အလကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူး... အလေးအနက်ကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်..." လို့ မာ
၀မ်က ယမန်နေ့ တွင်ဖွင့် လှစ်ခဲ့ သည့် တာတာအနှိပ်၊အလှပြုပြင်ခန်းတွက်ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
နဲနဲလေးတော့ နာပါတယ်... နာတာလေးလည်းကောင်းပါတယ်...
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်တော့ အမျိူးသမီးများနောက်ပိုင်းအလှတောင့် တင်းထင်ပေါ်အောင်၊ တင်ပါးများ
အား လက်သီးဖြင့် အထိုးခံခြင်း၊ ရင်သားများဖွံ့ ထွားတိုးတက်အောင် အရိုက်ခံခြင်းဖြင့် အလှပြု
လျော့ ရဲ၊ ပျော့ တွဲနေတာတွေ တင်းရင်း၊ ၀င်းပနေအောင် အရိုက်ခံကြပါစို့ ...
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တီထွင်ကြံဆသည်... အမေရိကန်တွင် လုပ်စားသည်....
ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်တွင်တော့ ထိုပါးရိုက်နားရိုက်၊ ထိုးကြိတ်ခြင်းဖြင့် အလှပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း
ကို အသက် ၄၄ နှစ်ရှိ ခွန်ယင်တော့ဘ်နွန် အမည်ရှိအမျိူးသမီးတစ်ဦးက နှစ်ပေါင်း ပရိစ္ဆေဒကြာ
မြင့် ခဲ့ သည့် နည်းပညာအဖြစ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီး သူမရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် လည်း
ရှေးတုံးကတော့ အခုခေတ်လို ရင်တွေ၊ တင်တွေကြီးတာသေးတာ ဂရုမစိုက်ကြတာမို့ အဲဒီခေတ်
ကလူကြီးတွေက ဒီနည်းပညာကို မဖြန့် ဝေခဲ့ ကြပါဘူး လို့ သူမက ဘန်ကောက်ပို့ စ် သတင်းစာ
သို့ သော်လည်း ယခုကဲ့ သို့ ခပ်ဆတ်ဆတ်လေးရိုက်ခြင်းဖြင့် ပျံ့ ကြဲနေသည့် အဆီများအား အလို
ရှိသည့် ရင်သားနေရာသို့ စုစည်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်....
ခွန်ယင်တော့ ဘ်နွမ် ရဲ့ ရင်သားအလှပြုပြင်နည်းကိုမယုံကြည်သူများအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံကျန်း
မာရေးဝန်ကြီးဌာနဲ့ သူမရဲ့ အနှိပ်ပြုပြင်ခြင်းကြောင့် ပျိူမေတို့ ရင်သား ဖွံ့ ထားလာခြင်းမှာအမှန်
တစ်ကယ်ဖြစ်ကြောင်း လေ့ လာစမ်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ကာ ထောက်ခံပြောဆိုခဲ့ ခြင်းကို တွေ့ မြင်နိုင်
ထိုသို့ မိမိတို့ ၏အလှအပများ စုဝေးဖြစ်တည်လိုသူအမျိူးသမီးများအနေဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုမပြုပဲ
ကိုယ်တိုင် ရိုက်ခတ်၊ နှိပ်နယ်ကာ ကြီးထွားဖွံ့ ဖြိုးစေနိုင်မည့် နည်းစနစ်ပညာပေးမှုကို ၀န်ကြီးဌာ
နအနေဖြင့် ပင် အကုန်အကျခံပြုလုပ်ပေးခဲ့ ပါတယ်...
အလှပြုပြင်လိုသူတွေအနေနဲ့ အခုလိုအရိုက်ခံ၊ အနှိပ်ခံယုံဖြင့် သိသိသာသာကြီးထွားလာမှာဖြစ်
တယ်ဆိုတာ အသိပေးလိုပါတယ်လို့ လည်း ခွန်ယင် ကဆိုပါတယ်...
ဥပမာအားဖြင့် ရင်သားအရွယ် ၃၀ လက်မ ရှိသူအနေဖြင့် ပြုပြင်မှုအပြီးမှာ ၃၂ လက်မ အထိကြီး
လာနိုင်ပါတယ်...ဒါဟာသက်သေအထောက်အထားနဲ့ ကိုပြနိုင်ပါတယ်လို့ သူမကဆိုပါတယ်...
လှချင်ယင်တော့နည်းနည်းတော့ အနာခံရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ လည်းသူမကဆိုပါတယ်...
တစ်ချိူ့ ရိုက်နှက်ပြုပြင်ပေးလို့ မရနိုင်လောက်အောင်သေးငယ်တဲ့ ရင်သားရှိသူတွေကိုတော့ ဝမ်း
နည်စွာနဲ့ ပဲ ငြင်းပယ်ခဲ့ ရတာမျိူးတော့ လည်းရှိခဲ့ ပါတယ်လို့ သူမကဆိုပါတယ်...
အခုအခါမှာတော့ တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်လုမတတ်ဖြစ်နေသည့် ရှေးဟောင်း ရိုက်နှက်၊ နှိပ်နယ်
ခြင်းနည်းပညာကိုသင်တန်းကြေး ဒေါ်လာ ၃ သိန်း ၃သောင်း၊ ၂သိန်း ၆သောင်း၃ထောင်၊၁သိန်း
၆ သောင်း ၄ ထောင် စသည်ဖြင့် ရက်ရက်ရောရော ဖြန့် ဝေကာ ပညာအမွေပေးလျှက်ရှိနေပါ
Before and after: One client shows her face before, left, and after four sessions of face-slapping,
'This is definitely not rubbish, this is very serious,' said Mawan, after opening Tata Massage yesterday.